Lavitra akaiky - NewsMada
Par NewsMada sur 02/09/2013
Nangata-pitahiana ho an’i Syria ny Papa François
Niantso ny Vondrona iraisam-pirenena mba hitady vahaolana momba ny ady an-trano any Syria, omaly, ny Papa François, nandritra ny Lamesa nataony tao Vatikana. Nambarany ho androm-bavaka manokana eran-tany sy ho fifadian-kanina amin’izany ny asabotsy 7 septambra ho avy izao. Hisy alim-bavaka izany eo amin’ny kianjan’ny Md Piera, amin’io andro io.
Niantso ireo olona tsara sitrapo rehetra koa izy, hiara-kiombona aminy amin’izany. « Hitsara izay tompon’antoka amin’ny herisetra sy manakana ny fandriampahalemana Andriamanitra sy ny tantara », hoy izy, nanoloana ireo kristianina marobe. Tsy ekeny, noho izany, ny fikasana hampiasa fitaovam-piadiana simika any Syria.
Fantatra fa mikasa hanafika any an-toerana i Etazonia sy Frantsa, hanoherana ny fitondrana syrianina.
Noroahina ny praiminisitra senegaley
Nesorin’ny filoha senegaley, Macky Sall, tamin’ny toerany, omaly, ny praiminisitra Abdoul Mbaye. Herintaona izay no nanendrena ity praiminisitra nolazaina fa tsy manana fironana politika ity. Tsy nanazava ny anton’ny fandroahana ny mpitondra tenin’ny fiadidiana ny filohan’i Sénégal.
Mpiasan’ny banky foiben’i Afrika Andrefana (BCEAO) tao Dakar ity praiminisitra ity, ary voalaza fa nahatafarina banky tsy miankina maro tao Sénégal. Inona tamin’ny fitantanany ny governemanta no tsy nety tamin’ny filoha senegaley, izay nilokaloka ny hiady amin’ny fahantrana sy ny kolikoly, ny volana marsa 2012 ?